Iindlela ezi-3 eziSimahla eziSimahla kwiPicksArt-Uluhlu oluhlaziyiweyo ngo-2021 Izikhokelo ze-Android
UManuel Ramirez | 20/12/2019 12:18 | IiApple zeApple
I-PicsArt Ngomnye wemizekelo ebalaseleyo, njengesixhobo esizinikeleyo sokwenza umxholo wemultimedia kwiselfowuni okanye ithebhulethi. Kodwa ayisiyiyo le nto kuphela, kodwa ikwakhona ezinye izinto ezibaluleke ngakumbi kunePicsArt kwaye siza kukubonisa kule posi.
Asizukunweba nokuba kunjalo, kodwa siza kukubonisa ezimbalwa ekufuneka uzithathele ingqalelo ukuba ube nazo ezandleni zakho, okanye endaweni yeselfowuni, izixhobo zokuhlela zezona zibalaseleyo kwaye kwezinye iimeko zigqithile kule Picsart ithandwayo. Ziphose kuyo.
1 Ikhamera ye-Adobe Photoshop
Ikhamera ye-Adobe Photoshop
Siza kuqala ngenye yezona zinto zintsha zithandwayo kule minyaka idlulileyo esinokuthi sikwazi ukufikelela kuyo kumboniso wayo weeveki ezimbalwa. Ukuba sikuxelela ukuba injongo yeAdobe, inkampani eyenza iinkqubo ezinkulu ezinjengeFotohop, i-Illustrator okanye iNkulumbuso, kukwenza iapp iya kuguqula ukudala umxholo wemultimedia, unokufumana umbono ongcono wokuba uyaphi.
Olona phawu lubalulekileyo olusetyenziswa yiKhamera yeAdobe Photoshop yile Ubukrelekrele bokuzenzela busebenzisa umbulelo kwitekhnoloji yeAdobe Sensei oyifakileyo kwiNkqubo yakho yeLifu yokuDala yeenkqubo. Ubukrelekrele bokuzenzela obusinceda kwizinto ezinjengokhetho olukrelekrele lwezinto. Ngaba ungazibuza ukuba olu khetho lunokusetyenziselwa ntoni? Ewe, ilula kakhulu, thabatha ngqo indawo apho iqabane lakho kunye nomntwana wakho bavele khona, kwaye kuyakwenza uhlengahlengiso kuphela kwimvelaphi yendawo. Ngamanye amagama, iya kwenza phantse izinto zobugqi ukuba iiapps ezimbalwa zinokusondela namhlanje.
Ngobukrelekrele bokuzenzela njengoyena mxhasi uphambili weKhamera yeAdobe Photoshop, sine-app ethi isebenzisa ukujonga kwangaphambili ngexesha lokwenyani. Oko kukuthi, sikhetha nasiphi na isiphumo kwaye siyasibona kumbono. Sinokwenza nokuthambeka okuthe ngcembe embindini wesikrini ukuze iye kuyantlukwano kwisiphumo kwaye sinokubona ngokugqibeleleyo ukuba ukubanjwa kwethu emini kuyatshintsha kubenye ebusuku kunye nenyanga epheleleyo ngasemva. Sikuxelela ukuba iyamangalisa.
Enye yezinto ezigqwesileyo kwiKhamera yeAdobe Photoshop kukuba kunjalo vula kubaphuhlisi abaninzi ukuba balayishe iziphumo zabo kwaye ezi zinokusetyenziswa ngabo basebenzisa usetyenziso. Inesitora sevenkile esinokusondela kuyo ukuze siyikhuphele kwaye ke sonwabele ezinye ezintle kakhulu. Ukuba sisebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa kwezinye iindawo zomfanekiso, siphucule imizobo, satshintsha ukusuka emini siye ebusuku, sazisa amafu apho kukho isibhakabhaka esiluhlaza kunye nolunye uthotho lwemisebenzi esikumema ukuba uyazi.
Kodwa ayihlali apha kuphela, ungasebenzisa i- izixhobo zasemva kwemveliso zokutshintsha umahluko, ukukhanya, imifanekiso yezityalo, ukufotwa kwedatha kunye nezinye ezininzi. Oko kukuthi, inayo yonke into esinokuyilindela kumhleli nakwikhamera konke kube kanye kodwa ngokuvumelana oko kuthetha ukuba sivela kwiAdobe.
Unokukhetha kwakhona ukuphucula ukufota kwaye isebenza kakuhle. Sikucebisa ukuba uyizame kuba iyayiphucula ifoto kwaye ayizukufaka nasiphi na isiphumo, kodwa isebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela.
Kwaye siphambi kwemboniso ekhutshwe yiAdobe kwezi ntsuku zidlulileyo. Ukuphehlelelwa ngokusesikweni kwesicelo kuya kuba kwi-2020 kwaye kulindeleke ukuba ize neendaba ezingakumbi. I-Adobe iyazi ukuba ngoku yonke into isendalweni yemixholo yemultimedia evela kwiselfowuni, ke iya kuyibeka yonke inyama kwi-grill ukuze esi sicelo sibe luhlaziyo olusuka kwiselfowuni.
Unako khuphela i-Android ngalo mzuzu kwi-APK esiyibeka ngezantsi kwaye siqwalasele ubukho bayo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle.
Khuphela iAdobe Photoshop Camera - APK
Ukuba sibeka i-VSCO kolu luhlu lwento ethile, ilula kakhulu: Uneyona ingqokelela yeefilitha esinokufaka isicelo kwiifoto zethu. Uhlelo lokusebenza olunamava kolu lokuhlela umxholo wemultimedia kwiselfowuni ngakumbi iifoto zethu.
Kwakhona Inoluntu olukhulu lwabasebenzisi bayo yonke imigangatho ukusuka kwi-amateur ukuya kubuchwephesha kwaye unokwenza iprofayili yakho ukuba wabelane ngendalo yakho nabani na omfunayo. Ngokuzenzekelayo inoluhlu lweefilitha zasimahla kunye nomrhumo ovumela ukuba ube nazo zonke intlawulo yenyanga. Ikwabandakanya iiphakheji zokucoca ulwelo onokuzithenga ukuze ufumane ezona zilungileyo zemizobo, imihlaba, ukubanjwa kwezinto zasedolophini okanye uhlobo nje lweediliya.
Ngaphandle kokuba neefilitha ezichazwe kwangaphambili, yenye yezona zinto zininzi siyayithanda iVSCO linani elikhulu lezicwangciso apho inika ukufikelela. Ukusuka kwelinye ukuya ekuloleni kunye nokwenza inkcazo enkulu kwiifoto zethu, kukukhanya okuqhelekileyo, umahluko, ubumnyama okanye ukugcwala. Olo seto lukhethekile kubhaliso lokufaka imibala esele ichaziwe kwaye sinokumisela ngokufanelekileyo ukuthanda kwethu.
Unako yenza iakhawunti yakho ngoGoogle ukuze uqale ukwazi ii-ins kunye nokuphuma kwesoftware ephathekayo enonxibelelwano lwayo kwaye eyibeka kwindawo eyahlukileyo kakhulu kwabanye.
Kwaye ukuba ufuna ngaphezulu, ubulungu bukunika amandla okwenza oko phinda ujonge ukubukeka kweekhamera ze-anthological ezinje nge-Kodak, Fuji, Agfa kunye nabanye ngeFilimu K. Koko kubhaliswa uneengxoxo ezingaphezulu kwama-200 kwaye ungasebenzisa iingcebiso, amaqhinga kunye neencwadana ezenzelwe abasebenzisi ababhalisileyo. Ugqibelele ukubonisa umsebenzi wakho ukuba ukufota yinto yakho kwaye uqala ukuqaphela ukuba umsebenzi wakho uthabathela ingqalelo abahlobo kunye nosapho. Uza kudibana noluntu olukhulu lwabasebenzisi abafana nawe abafuna ukwazi iifoto zabanye.
Kufuneka uthembele I-VSCO ihlaziywa rhoqo ngezinto ezintsha kunye neefilitha ezintsha onokuziqhelanisa namaxesha amatsha adlala ngokhuphiswano olukhulu nezinye iinkqubo zokusebenza; njengePicsArt. Kwaye ukuba uyayithanda ividiyo, i-VSCO ikunika ithuba lokuyihlela, nangona kuphela kubhaliso lwenyanga. Ngamanye amagama, kwinguqulelo yasimahla unokulibala malunga neli nqaku elinokuza ngokufanelekileyo.
I-VSCO: Ifoto kunye noMhleli weVidiyo
UGoogle usungule le app for ube lolunye uhlobo olukhulu njengenye yeziapps ngayo yonke into esinokuyidinga. Inegalari enkulu yokuhluza kunye nabanye abaninzi ukuphucula iifoto. Mhlawumbi ayinazo ezininzi njenge-VSCO, kodwa inele ngokwaneleyo ukuba ibe licandelo elipheleleyo.
Kuba eyona nto ibalaseleyo kwi-Snapseed yindlela ezele ngayo ngokwayo kunye nazo zonke izixhobo eziyibeka kwiselfowuni. Sithetha ngokuphucula ifoto, imigca yentsontelo, ibhalansi emhlophe, ukusika iifoto, ukujikeleza, umbono, ukwandisa, ukukhetha, ibrashi, ukususa amabala, indawo ye-hdr, ukukhanya okuqaqambileyo, umahluko weethoni, idrama, iidiliya, ingqolowa yefilimu, ukukhanya kwe-retro, i-grunge, emnyama nomhlophe, i-noir, i-portrait, i-pose pose, ukufiphala, i-vignetting, ukuvezwa kabini, isicatshulwa kunye nezakhelo.
Oko kukuthi, uya kuba nakho ukongeza isicatshulwa kwiifoto zakho, kubandakanya isakhelo sokuyinika inqaku elikhulu okanye wenze iziphumo zokuvezwa. Ingayiyo silahlekile ukhetho lweekholeji Inayo iPicsArt, kodwa ngokuqinisekileyo sisicelo esihle sokuhlela umfanekiso esinamandla ngandlela zonke.
Siphinde sibeke ukugxininisa kwi-brush ekhethiweyo kunye nendlela Singavula zombini iifayile zeJPG kunye neRAW. Ngokukodwa ukugcina engqondweni ukuba sinokuyenza kule fomathi yokugqibela kwaye iqulethe yonke idatha yefoto ngaphandle kwelahleko ukuze sikwazi ukusebenzisa ngcono iziphumo zokuvelisa emva kwemveliso. Mhlawumbi singathanda ukuba ifumane uthando ngakumbi kuGoogle ngohlaziyo olungakumbi, kodwa ke, ngamanqaku ayo ayi-4,6 ngokomndilili ongaphaya kwesigidi esi-1, sinokukuqonda ukubaluleka kwale app kwizigidi zabantu kwihlabathi liphela.
Bakhe Izixhobo ezingama-29, izihluzi zazo, izixhobo ezinje ngokususa ibala, i-HDR okanye imbono yeminye yemizekelo yohlelo lokusebenza olupheleleyo onalo ngokupheleleyo kwiVenkile yokuDlala. Oko kukuthi, akuyi kufuneka wenze ii-micropayments okanye nantoni na kwaye ayinayo intengiso. Ngaphezulu kokugqibelela kwaye simahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » IiApple zeApple » Eyona ndlela ingcono yasimahla yePicsArt
I-AirDrop kwi-Android: zezinye iindlela ezilungileyo
I-ePublibre ayisebenzi: kwenzeka ntoni? -Izinye iindlela ezingcono